Ecommerce fialantsasatra: finday, takelaka ary birao | Martech Zone
Ecommerce fialantsasatra: Finday, Tablet ary Desktop
Talata, Desambra 6, 2011 Alahady, Desambra 4, 2011 Adam Small
Ity dia fijery tena mahaliana amin'ny fandaniam-bola sy ny fiovam-po amin'ity vanim-potoana fialantsasatra avy amin'ny olona ity Monetate. Raha eritreretina dia manome porofo mazava isika momba ny fitomboan'ny fampiasana finday sy tablette ho an'ny fividianana ny Black Friday sy Cyber ​​Monday, manome fanazavana bebe kokoa momba ny fihetsika tsy mitovy amin'ny fampiasa olona amin'ny takelaka, finday ary birao izy. Raha ny fahitako azy dia hita fa ny olona misy takelaka dia efa mahazo aina tsara ny miantsena amin'izy ireo fa ny mpampiasa finday kosa mety somary misalasala ihany. Angamba satria ny tanjon'izy ireo dia ny hanao fikarohana fa tsy hividy
Tags: tahan'ny manampy amin'ny saretyblack fridaycyber mondaytahan'ny add-to-cart amin'ny biraotahan'ny fihenan'ny biraotaham-panovana eo amin'ny biraoecommercetahan'ny add-to-cart amin'ny findaytaha ambony amin'ny findaytaham-panovana findaytaham-panampiana takelaka amin'ny takelakataham-pamoahana takelakataham-panovana tablette
Torolàlana ho an'ny Automation SEO
Tombony 5 sy torohevitra momba ny atiny mividy
Dec 6, 2011 amin'ny 10: 37 AM
Ny laharan'ny “Add-to-cart” dia tsy misy afa-tsy fividianana an-tserasera. Miahiahy aho fa mety mividy toy izany matetika ny mpampiasa finday, saingy mirona mividy any amin'ny fivarotana. Ohatra, mampiasa finday matetika aho hanamarina ny adiresin'ny fivarotana/fotoana fisokafana. Misy porofo fanampiny ve amin'ny filazana fa ny mpitsidika amin'ny fitaovana tablette dia manaraka ny lalan'ny fiovam-po?
Dec 6, 2011 amin'ny 10: 46 AM
Hevitra lehibe, MarketingXD, ary iray tokony ho nokasihintsika. Tena tsy noheveriko fa tsy dia sarobidy loatra ny mpampiasa finday… tena sarobidy izy ireo, raha tsy mihoatra! Ary mitombo ny lazany!